Kenya oo baajisay banaanbax lagu diiddanaa xannibaadda Qaadka ee Soomaaliya. – SDNTV
Kenya oo baajisay banaanbax lagu diiddanaa xannibaadda Qaadka ee Soomaaliya.
Hoggaamiyayaasha Gobolka Meru ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay dib u dhigeen Banaanbax ay ku dalbanayeenin ay dowladda Kenya heshiis la gaarto Dowladda Soomaaliya si looga qaado xannibaadda saran Jaadka ka soo go’ayay gobolkooda ee loo dhoofiyo Soomaaliya.
Shan Xildhibaan oo uu gobolka ku leeyahay Baarlamaanka Kenya iyo 23 Xildhibaan Gole degaan ayaa qorsheynayay banaanbaxa oo uu qorshuhu ahaa la qabto Jimcaha waxaana beddelka banaanbaxa ay sheegeen in ay kulan la qaadan doonaan Madaxda sare ee Kenya kuwaas oo ay sheegeen in ay ku dhowyihiin heshiis ay la gaaraan Dowladda Soomaliya.
Ganacsatada, Beeraleyda iyo shaqaalaha ka shaqeeya Beeraha ayaa aad uga cabanaya xayiraadda Qaadka Kenya iyaga oo sheegay in ay noloshooda halis ku jirto maaddaama ay ku tiirsanaayeen Beeraha Qaaadka Kenya eeloo dhoofiyo Soomaaliya kaas oo hakad ku jira tan iyo billowgii sanadkan 2020ka.
Guddoomiyaha Gobolka Meru Kiraitu Murungi, ayaa sheegay in Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo uu la kulmay uu u ballanqaaday in dhawaan dowladdiisa ay heshiis lagaari doonto Soomaaliya islamarkaana ganacsiga Qaadka uu dib u billaaban doono.
Hayeeshee Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Kenya aysan wax wadahadal ah lagaleyn dowladda Soomaaliya ee hadda jirta hayeeshee ay ka war dhowrayaan dowladda ku xigta midda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo taas oo lagu wado in dhowr bilood kadib ay ka dhalato dalka.
Qaadka Kenya ayaa hadda ka hor heystay Suuqa Soomaaliya oo kaliya kaddib markii ay suuqyadii kale ee Caalamka diideen maaddaama Qaadka lagu sheegay in uu kamidyahay daroogada horseedda faldambiyeedyada badan, waxaana suuqii kaliya ee ay heysteen uu ahaa kan Soomaaliya kaas oo isna hadda hakad ku jira.
Previous Qaramada Midoobey oo dalbatay in la kordhiyo dhaqaalaha ku baxa gargaarka Soomaaliya
Next Sucuudiga oo dib u furaya gudashada Cumrada.